Izesekeli | TeraNews.net |
IHuawei MateView GT XWU-CBA ikhipha izimbangi emakethe…
I-Synology HD6500 4U NAS
Uyonga kanjani imali ekwakheni i-PC yokudlala ngo-2022
I-HUAWEI PixLab X1 iyi-MFP yokuqala yomkhiqizo
Нельзя сказать, что рынок многофункциональных печатающих устройств нуждается в продукции. Такие производители, как Canon, HP и Xerox…
Isikhumbuzo se-DAC Aune X8 XVIII
Inkampani yaseShayina i-Aune Audio, yokugubha iminyaka engu-18, yanquma ukujabulisa abalandeli ngesibuyekezo esithakazelisayo. I-DAC yakhethwa "njengesipho" ...
I-PowerColor RX 6650 XT Hellhound Sakura Edition
Uhlobo lwaseTaiwan i-PowerColor luzame ukudonsa ukunaka komthengi ekhadini levidiyo leRadeon RX 6650 XT ngendlela engavamile. Isisheshisi...
Ikhadi lemifanekiso le-ASUS GeForce RTX 3080 10GB Noctua Edition
Kwethulwa ngoNcibijane wango-2021, amakhadi wezithombe we-ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition athengiswa njengamakhekhe ashisayo emhlabeni jikelele.…
I-Samsung Pro Endurance microSD yokuqoshwa kwevidiyo
Umdondoshiya waseKorea uSamsung uthokozise abathwebuli bezithombe abangochwepheshe ngesinye isisetshenziswa sokuthwebula ividiyo. microSD memori khadi...
Ungathenga ikhebula le-USB Type-C 2.1 ezitolo ezikhethekile
Izinga le-USB Type-C 2.1 lisazoba njalo. Ubuchwepheshe obunelungelo lobunikazi ngo-2019 buthole ukuqaliswa okunengqondo. Nakuba abaningi…
I-MSI Modern MD271CP FullHD Curved Monitor
Umkhiqizo waseTaiwan i-MSI umlutha kakhulu kumagajethi emidlalo waze wakhohlwa ngokuphelele ngemishini yebhizinisi. Kepha u-2022 uthembisa konke ...
I-Chuwi RZBox 2022 ku-Ryzen 7 5800H
Umkhiqizi wezinto zikagesi waseShayina owaziwayo unqume ukunqoba imakethe yomhlaba ngamakhompyutha amageyimu ahlangene. I-Chuwi RZBox entsha…
I-Samsung SSD Rugged Durability ene-MIL-STD 810G
AbakwaSamsung bamemezele ukukhishwa kwamadrayivu amasha angama-2.5-inch angaphandle e-SSD e-USB Type-C. Isici sedivayisi...
Ikhadi lehluzo le-PowerColor Radeon RX 6650XT
Umkhiqizi waseTaiwan wamakhadi ezithombe zokudlala i-PowerColor ulungiselela ukukhishwa okulandelayo. Isixazululo segeyimu sizotholakala ku-chipset…
I-Micro PC MELE PCG02 GLK (HS081720)
Umkhiqizo waseShayina owaziwa kancane i-MELE ukhanye emakethe yamakhompiyutha amancane ngomnikelo ojabulisa kakhulu. Thenga I-Micro PC MELE...
I-Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse
E-Switzerland, ochwepheshe be-Logitech nabaklami banikeza izingxoxo futhi banquma ukumangaza umhlaba ngokuthile okusha nokujabulisayo. Imibono yayiqinile, kodwa...
MB Biostar Z690A-Silver LGA1700 isokhethi
Umkhiqizi waseTaiwan we-BIOSTAR, obekwe engxenyeni yesabelomali, ungene emakethe ngento ethokozisayo…
I-Lenovo Xiaoxin AIO All-in-Ones – Inani Elihle Lemali
I-Lenovo inalo lonke ithuba lokuhambisa izimbangi emakethe ye-monoblock yebhizinisi. Umthengi unikezwa oku-2 okuthokozisayo…
I-Intel ikude ukwazi ukuvimba amaphrosesa abo
Lezi zindaba zivele kumthombo we-pikabu.ru, lapho abasebenzisi baseRussia baqala ukukhononda kakhulu "ngokuphuka" kwama-Intel processors ngemuva ...
DLULA ... BONISA OKWENGEZIWE ... Akusekho okuthunyelwe
IHuawei MateView GT XWU-CBA ikhipha izimbangi emakethe yokuqapha
Izinkonzo Zokusakaza ezihamba phambili ze-Smart TV
I-TV-Box T98 mini - umnikazi werekhodi omusha wokushisa ngo-2021
Ipulatifomu ye-LGA1700 ezitolo maduzane
I-AMD: Ukuvuselelwa komshayeli wezimayini
I-Beelink GT1-Isidlali Semidiya ngokulawulwa kwezwi
I-TV-box nVidia Shield TV Pro 2019: isibuyekezo, imininingwane
© 2022 - Teranews. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Amakhukhi adingekayo abaluleke kakhulu ukuze iwebhusayithi isebenze kahle. Lawa makhukhi aqinisekisa ukusebenza okuyisisekelo nezici zokuphepha zewebhusayithi, ngokungaziwa.
kubukwe_cookie_policy 11 izinyanga Ikhukhi isethwe yi-GDPR Cookie Consent plugin futhi isetshenziselwa ukugcina ukuthi umsebenzisi uvumile yini ukusetshenziswa kwamakhukhi. Akugcini idatha yomuntu siqu.